Tsy manakana ny fifindran’i Dax ny Fosa Jr | NewsMada
Tsy manakana ny fifindran’i Dax ny Fosa Jr
Nitondra fanazavana, ny amin’ny resaka mandeha amin’ny fifindran-toeran’i Dax, any amin’ny Kaizer Chiefs Afrika Atsimo, ireo mpitantana ny Fosa Jr , omaly. “Misokatra izahay ary tsy manakana ny fandehanan’i Dax, hilalao any amin’ny Kaizer Chiefs. Na izany aza, tokony ho ao anaty fifanajana sy ny lalàna ny fifindrany“, hoy ny filohan’ny klioba, Arno Steenkist. Nohamafisiny fa efa nisy ny resaka nifanaovan’ny telo tonta, aorian’ny fahavitan’ny fifaninanam-pirenena, amin’ity faran’ny volana septambra ity, vao tokony handeha i Dax. Na eo aza izany, nodinganin’i Dax, ny Fosa Jr ka nandeha namonjy ny Kaizer Chiefs, tsy nahazo fahazoan-dalana tamin’ny klioba ary tsy nampandre ny mpitantana ny Fosa Jr ny tenany. Nohamafisin’i Hubert Grosset, sekretera jeneralin’ny ekipa fa manana fifanarahana, hatramin’ny taona 2020, amin’ity klioban’i Boeny ity, i Dax ary fantatry ny federasiona izany. “Tsy nametraka fanakanana ho azy izahay fa nanao fitoriana kosa teny anivon’ny fitsarana“, hoy ihany izy ireo. Nohamafisiny fa tsaho avokoa ny resaka volabe ho tambin’ny fifindran-toeran’i Dax. Nohelohin’ny Fosa Jr tanteraka ny fanalam-baraka nataon’ny Kaizer Chiefs, amin’ny filazana fa “amateur“, ny Fosa Jr sy ny baolina kitra eto amintsika.
Mpilalao telo nantsoina ho Barea
Nambaran’ireo mpitantana ny Fosa Jr fa 3 ireo mpilalaon’izy ireo nantsoina ho Barea, hihaona amin’i Sénégal. Eo i Baggio, tsy afaka namonjy ny ekipam-pirenena noho ny ny ratra nahazo azy. Eo koa i Mario, efa any amin’ny Barea amin’izao fotoana izao ary i Dax. “Efa nalefa ny fiantsoana azy ary nampahafantarina izany koa ny klioba Kaizer Chiefs, ka anjaran’i Dax sisa na ho avy izy na tsia, fa tsy misy hidiran’ny Fosa Jr“, hoy i Arno Steekist.
Tsy marina ny filazana fa nogiazan’ny klioba ny taratasy fiantsoana an’i Dax, ho ao anaty Barea, raha ny nolazain’i Harivola Ando, mpiandraikitra ny ekipa. “Aminay, ambony ny tombontsoan’ny firenena ary manan-danja ny lalao hikatrohana amin’i Sénégal, ka tsy afaka ny hanao sakana, mpilalao izahay”, hoy izy ireo.